hoy izy ny fametrahana ny Masoivoho manokana ho fiarovana ny Mpanjifa satria na dia eo aza ny lalànan’ny tolotra sy tinady mety hiteraka fisondrotam-bidim-piainana dia misy mihitsy ihany koa ny fanararaotana. Mety nisy ihany koa ny fanapahan-kevitry ny fanjakana nahatonga ny fidanganam-piainana tahaka ny fampiakara ny karaman’ny mpiasam-panjakana kanefa tsy narahana aro fanina. Azo ekena raha mitaha amin’ny vidim-piainana izay misondrotra isan’andro ny fanondrotana ny karama saingy tokony hisy hatrany ny aro fanina miara-dalana amin’ireny fandraisana fanapahan-kevitra ireny mba ho tombony ho an’ny mpanjifa sy ny toekarena mihitsy. Hatreto aloha dia ambony ary miakatra hatrany ny tahan’ny sondro-bidim-piainana nanomboka ny taona 2017 hatramin’ny faran’ny taona 2019 ary mipaka indray aty amin’ny taona vaovao izany. Tokony hotazonina ho 6% anefa izany raha ny nambaran’ny teo anivon’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI). Miseho tsikelikely sy miandalana amizao ny lala-mankany amin’ny fidanganam-bidim-piainana izay mihamafy hatrany. Eo ny fiakaran’ny entana ilaina andavanandro izay mampikaikaika ny Malagasy ary saika manao izay saim-pantany fotsiny ireo mpivarotra. Ilaina ny fanamafisana ny asan’ireo sampana mazava mijery manokana ny fisondrotan’ny entam-barotra hiadivana amin’ny fanararaotana. Mijaly ny mpanjifa ary andrasana ny fandraisana fanapahan-kevitra avy amin’ny fanjakana satria efa miaina tanteraka anatin’ny fisondrotam-bidim-piainana isan’andro ny Malagasy kanefa ny fahefa-mividy latsaka ambany dia ambany.